Chinja dhata rekuchengetedza data:
Zviri mukati memapeji ewww.amp-cloud.de zvakagadzirwa zvine hanya kukuru. Hapana vimbiso inopihwa kururamisa, kukwana uye musoro wenyaya yezviri mukati. Semubatsiri webasa, mutoro unoenderana ne § 7 Ndima 1 TMG inoshanda kune zvemukati zvirimo pamapeji e www.amp-cloud.de zvinoenderana nemitemo yakajairwa. Zvinoenderana ne §§ 8 kusvika ku10 TMG, zvisinei, hapana chisungo semupi webasa wekutarisa kana kutumira ruzivo rwechitatu kana kuongorora mamiriro ezvinhu anoratidza zvisiri pamutemo. Zvinosungirwa kubvisa kana kuvharidzira kushandiswa kweruzivo maererano nemitemo yakajairika zvinoramba zvisina kukanganiswa. Nekudaro, chikwereti cheichi chirevo chinogoneka chete kubva panguva panguva yatinozoziva kutyorwa kwepamutemo chaiko. Kana tikangoziva kutyorwa kwepamutemo kunoenderana, zvirimo zvinozobviswa nekukasira.
Kuongorora maturusi uye echitatu-bato maturusi
Une mvumo yekuve nedata ratinozvishandura otomatiki pahwaro hwekubvumirana kwako kana mukuzadzikisa chibvumirano chakapihwa kwauri kana kune wechitatu bato mune yakafanana, inoverengwa fomati muchina. Kana iwe ukakumbira kuendesa chaiko kwedata kune mumwe munhu ane basa, izvi zvinongoitwa chete kana zvichinyatsoita.
Makuki ari muchikamu che "Basa" anoshanda chete uye anodikanwa kuti webhusaiti iitwe kana kuitiswa mamwe mabasa. Vanopa chikamu ichi saka havagone kumiswa.
Iyi data haina kusanganiswa nemamwe madhata e data.
Iko kuchengetwa kweGoogle Analytics makuki kunoitika pahwaro hweArt. 6 Ndima 1 yakavhenekera GDPR. Iyo webhusaiti inoshanda ine kufarira zviri pamutemo kuongorora maitiro evashandisi kuitira kuti igadzirise zvese zviri zviviri webhusaiti uye kushambadzira kwayo.